VAN naTIR, ndezvipi izvi? ndezvipi? zvinoshandiswa sei? | Ehupfumi Zvemari
VAN uye TIR
Ino nguva taida kuita ongororo diki yematemu maviri anoshandiswa zvakanyanya munyika yezvemari nehupfumi hwekuita kwavo kunoshamisa kana zvasvika goho zvabuda pamakambani uye kuziva kana kudyara mune chimwe chirongwa kuri kuita, kunozivikanwa se iyo NPV uye IRR. Aya maturusi maviri anogona kuita kuti iwe uwane mari yakawanda kana kugara kure nesarudzo dzakashata dzekambani.
1 Chii chinonzi NPV uye IRR
2 Chii chinonzi NPV
3 Kana mwero uchinge wasarudzwa nemusimari
4 NPV ingashandiswa sei
5 Zvakanakira NPV
6 Chii chinonzi IRR uye inoshandiswa sei
7 Rudzi urwu rwenzira rwakatendeka here?
8 Nguva yekushandisa VAN kana TIR
8.1 Nguva yekushandisa iyo VAN
8.1.1 Chii chinonzi NPV fomula?
8.2 Chii chinonzi TIR uye ndechei?
8.2.1 Inoshandiswa riinhi?
9 Maitiro ekuziva kana iyo IRR yakanaka
Chii chinonzi NPV uye IRR
NPV uye IRR marudzi maviri ezvishandiso zvemari kubva pasirese zvemari zvine simba kwazvo uye zvinotipa mukana wekutarisa kubatsirwa uko mapurojekiti akasiyana ekudyara anogona kutipa. Muzviitiko zvakawanda, mari yekudyara muchirongwa haina kupihwa sekudyara asi semukana wekutanga rimwe bhizinesi nekuda kwepundutso.
Zvino, tichaita sumo diki kune iyo NPV uye IRR, idzi pfungwa dzemari zvakasiyana kuitira kuti iwe uone kuti akaverengerwa sei uye ndeipi sarudzo yakanakisa zvichienderana nemhedzisiro iwe yaunoda kuziva uye iyo mikana inopihwa neNPV uye IRR.
Chii chinonzi NPV
Iyo NPV kana Net Present Value, chishandiso chemari ichi chinozivikanwa semusiyano uripo pakati pemari inopinda mukambani nemari inodyarwa muchigadzirwa chimwe chete kuti uone kana chiri chigadzirwa (kana chirongwa) chinganyatso batsira kukambani.
VAN ine chikwata chechibereko iyo inonzi cutoff rate uye ndiyo inoshandiswa kugara ichizvivandudza. Yakati cut-cut rate inopihwa nemunhu anozoongorora chirongwa chakataurwa uye izvo zvinoitwa pamwe chete nevanhu vari kuzoisa mari.
Iyo NPV yekucheka-off chiyero inogona kuve:
Iko kufarira iri mumusika. Izvo iwe zvaunoita kutora kwenguva refu-chikamu chimbadzo icho chinogona kutorwa zviri nyore kubva mumusika uripo.
Rate mukubatsira kwekambani. Chiyero chemubereko chakatarwa panguva iyoyo chinoenderana nekuti mari yacho inotsigirwa sei. Kana zvaitwa nemari iyo mumwe munhu akaisa mari, saka chiyero chekucheka chinoratidza mutengo wemari yakweretwa. Kana zvaitwa neayo capital, yave nayo mutengo wakananga kukambani asi zvinopa mugovani purofiti
Kana mwero uchinge wasarudzwa nemusimari
Izvi zvinogona kuve chero chiyero chesarudzo yako.
Inowanzoitwa pamwe ne shoma purofiti iyo investor inotarisira kuve nayo uye ichagara iri pazasi pemari iyo yairi kuzoisa iyo mari.
Kana muzvinashawo achida a chiyero icho chinoratidza iwo mukana wemutengo, munhu anomira kugamuchira mari yekuisa mari mune chimwe chirongwa.
Kuburikidza neNPV iwe unogona kuziva kana chirongwa chichigona kana kwete Tisati tatanga kuzviita uyezve, mukati mekasarudzo yeprojekti imwechete, zvinotibvumira kuti tizive kuti ndeipi inobatsira kupfuura zvese kana kuti ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka kwatiri. Izvo zvinotibatsirawo zvakanyanya mukutenga maitiro, nekuti kana tichida kutengesa, iyi sarudzo inotibatsira zvakanyanya kuziva kuti imarii chaiyo yemari chaiyo yatinofanira kutengesa kambani yedu kana kana isu tichiwana yakawanda nekuchengeta yedu bhizinesi.
NPV ingashandiswa sei
Kuziva mashandisiro iyo NPV isu tine fomula iri iyo NPV = BNA - Investment. Iyo Van isu tatoziva kuti chii uye iyo BNA ndiyo yakagadziriswa net net kana mune mamwe mazwi, kuyerera kwemari kune iyo kambani inayo.
Iyi nzira inofanirwa kugara ichishandiswa neyakavandudzwa mambure purofiti uye kwete neyakafungidzirwa mambure purofiti yekambani kuti maakaundi edu arege kukundikana Kuziva chii chinonzi BNA unofanira kuita dhisikaundi TD kana dhisikaundi rate. Iyi ndiyo huremu hwepasi hwekudzoka uye inozivikanwa seinotevera.
Kana iyo mwero wakakwira kupfuura iyo BNA, izvi zvinoreva kuti mwero hauna kugutsikana uye isu tine NPV yakaipa. Kana iyo BNA yakaenzana nekudyara, izvi zvinoreva kuti mwero wakasangana, iyo NPV yakaenzana ne0.
Kana iyo BNA iri pamusoro zvinoreva kuti mwero wakasangana uye nekuwedzera, ivo vakakwanisa kuwana purofiti.
Saka kuti isu tikurumidze kunzwisisa
Kana iyo yekupedzisira kesi, zvinoreva kuti chirongwa ichi chinobatsira uye unogona kuenda mberi nazvo. Kana iri iyo kesi mune yekukwevera, chirongwa ichi chinobatsira nekuti iyo TD kuwana inosanganisirwa asi iwe unofanirwa kungwarira. Kana zvoitika kesi yekutanga, chirongwa hachina pundutso uye iwe unofanirwa kutsvaga dzimwe sarudzo.
Iwe unofanirwa kusarudza chirongwa chinotipa iyo yakanakisa yekuwedzera purofiti.
Imwe yei chikuru zvakanakira uye chikonzero nei iri imwe yenzira dzinoshandiswa zvakanyanya ndeyekuti mambure kuyerera kwemari kunoenderana panguva ino. Iyo NPV kana Net Present Value inokwanisa kudzikisa huwandu hwemari inogadzirwa kana iyo inopihwa kune imwechete unit. Uye zvakare, zvakanaka uye zvisina kunaka zviratidzo zvinogona kuiswa mune kuyerera kuverenga kunoenderana ne mari inopinda uye inobuda pasina mhedzisiro yekupedzisira ichishandurwa. Izvi hazvigone kuitwa neiyo IRR umo mhedzisiro yacho yakasiyana zvakanyanya.
Zvisinei, NPV ine isina kusimba poindi Uye ndezvekuti mwero unoshandiswa kudzikisira mari unogona kunge usinganyatsonzwisisika kana kutomboita gakava kuvanhu vazhinji.
Zvino, kana zvasvika pakugadzirisa huwandu hwechido, ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa nekuvimbika kwakanyanya.
Chii chinonzi IRR uye inoshandiswa sei
Chii chinonzi IRR? IRR kana iyo yemukati chiyero chekudzoka, ndiyo mutengo wekudzikisira uyo waive nawo muchirongwa uye izvo zvinotibvumidza isu kuti iyo BNA ingangoenzana nekudyara. Kana tichitaura nezve TIR inotaura nezve yakanyanya TD kuti chero chirongwa chingave nacho kuitira kuti chionekwe sezvakakodzera.
Kuti uwane iyo IRR nenzira kwayo, iyo data ichazodikanwa saizi yekudyara uye inofungidzirwa net net flow. Chero nguva iyo IRR painowanikwa, iyo NPV fomula yatakupa iwe muchikamu chepamusoro inofanira kushandiswa. Asi kutsiva iyo Van level ne0 kuitira kuti itipe iyo dhisikaundi ratekana. Kusiyana neNPV, kana mwero wakanyanya kwazvo, zviri kutiudza kuti chirongwa ichi hachina pundutso, kana mwero wakaderera, izvi zvinoreva kuti chirongwa ichi chinobatsira. Iyo yakaderera mwero, iyo inobatsira kwazvo chirongwa ichi.
Rudzi urwu rwenzira rwakatendeka here?
Iwe unofanirwa kuziva kuti kushoropodzwa kwekuti nzira iyi yakatambura kwakanyanya nekuda kwehuremu hwekuoma kwayakaita kune vanhu vazhinji. Nekudaro, mazuva ano zvave kutokwanisika kuronga mumaspredishiti uye kuverenga kwazvino kwesainzi kunouyawo nesarudzo iyi yakaiswa. Ivo vakabudirira izvo zvinogona kuitwa mumasekondi.
Iyi nzira ine yakapusa nzira yekuverenga kana iwe uchitoziva mashandisiro ayo uye iyo inopa inoshanda zvakanyanya mhedzisiro, inova el mitsara yekududzira nzira.
Kunyangwe zvakadaro, kudzokera kune yakanyanya kushandiswa uye yekutanga, zvinoitwa kana mune chimwe chirongwa zvave zvichikwanisika kuita kudzorera kana kubhadharisa izvo zviri kuva nazvo, kwete pakutanga chete asi panguva yehupenyu hunobatsira zvimwe chete, zvimwe nekuti chirongwa ichi chaenda nekurasikirwa kana matsva matsva akaverengerwa.
Nguva yekushandisa VAN kana TIR
Dzese NPV neIRR zviratidzo zviviri zvinonyanya kushandiswa nevemazvikokota, asi chimwe nechimwe chezvishandiso izvi chine mushandiso chaiwo kana uchishandisa. Uye zviri nyore kuziva nguva yekushandisa iyo NPV uye kana iyo IRR uye maitiro ekuyera mhedzisiro yaunowana kubva kune ese ari maviri.
Naizvozvo, pano isu tiri kuzokusiya iwe nenzira inoshanda nguva yekushandisa imwe neimwe yadzo.
Nguva yekushandisa iyo VAN
Iyo NPV, ndiko kuti, iyo mambure ikozvino kukosha, ndiyo musiyano unoshandiswa nemakambani mazhinji kuti ugone kuenzanisa mambure emari kuyerera. Ndokunge, kudzikisa zvese zviyero zvemari zvinogadzirwa kana izvo zvinopihwa mune imwechete nhamba. Uye zvakare, icho chishandiso chavanoshandisa kuziva kana chirongwa chiri kushanda; mune mamwe mazwi, kana paine mabhenefiti anoenderana nezvakachengetwa.
Kuti vaite izvi, vanoshandisa fomula NPV = BNA-Investment. Nekudaro, kana iko kudyara kuri kukuru kupfuura iyo BNA, iyo nhamba inowanikwa kubva kuNPV haina kunaka; uye kana zviri zvinopesana zvinoreva kuti pane purofiti.
Saka rinofanira kushandiswa riini? Zvakanaka, kana iwe uchida kuziva kana yako mambure purofiti yakanyatsokwana kana kana iwe uri kurasikirwa. Muchokwadi, izvi zvinofanirwa kushandiswa pagore, kunyangwe hazvo zvirinani nhamba dzinogona kudhonzwa chero nguva yegore (asi nguva dzose nedhata kusvika musi iwoyo).
Chii chinonzi NPV fomula?
Ft ndiyo kuyerera kwemari mune yega yega nguva (t).
I0 inomiririra mari yekutanga.
n ndiyo nhamba yenguva dziri kuverengwa.
k ndiyo chiyero chekudzikisa.
Chii chinonzi TIR uye ndechei?
Tichitendeukira ikozvino ku IRR, unofanirwa kufunga kuti, sezvatakataura, hazvina kufanana neNPV, iwo maturusi maviri akasiyana zvachose anoyera zvinhu zvakafanana, asi haana kufanana.
El IRR kukosha kunoshandiswa kuongorora kuti chirongwa chinobatsira here kana kwete, asi hapana chimwe chinhu. Fomura yakashandiswa yakafanana neiyo yeNPV, asi mune iyi NPV iri 0 uye mubvunzo ndewekutsvaga mutengo wekudzikisa, kana kudyara.
Nekudaro, iyo yepamusoro iyo kukosha iyo inobuda mune iyo fomula, zvinoreva kuti chirongwa hachina pundutso. Asi iyo yepazasi iri, iyo inobatsira zvakanyanya.
Uye rinofanira kushandiswa riini? Mune ino kesi, Ndicho chakanakisa chiratidzo chekuongorora kubatsirwa kana kwete kwechimwe chirongwa. Mune mamwe mazwi, inokupa yakatarwa dhata, asi izvi hazvigone kuenzaniswa nedhata reimwe chirongwa, kunyanya kana ivo vakasiyana, nekuti kune zvimwe zvinowirirana zvinouya mukutamba (semuenzaniso, kuti rimwe remapurojekiti anotanga munguva pfupi obva atora off, kana iyo inogara yakasimba munguva).
Kazhinji, zvese NPV uye IRR zvinoratidza kana chirongwa chingaitwe kana kwete, ndiko kuti, kana mabhenefiti akawanikwa nawo kana kwete. Iko hakuna chishandiso chiri nani pakuita izvi, nekuti zvese zviri zviviri NPV uye IRR zvinowirirana uye varimi vanofunga mhedzisiro yevaviri vasati vaita sarudzo.
Maitiro ekuziva kana iyo IRR yakanaka
Mushure mezvose zvatakakuudza, hapana mubvunzo kuti chinongedzo chinogona kuve nehuremu zvakanyanya kana zvasvika pakuziva kana chirongwa chakanakira kana kuti chisingaite chiyero chemukati chekudzoka, ndokuti IRR. Asi iwe unoziva sei kuti iyo IRR yakanaka kana kuti kwete muchirongwa?
Paunenge uchitarisa chiyero ichi, ndiko kuti, iyo IRR, zvinodikanwa kuti utore zvinhu zviviri zvakakosha kwazvo. Izvi ndeizvi:
Hukuru hwekudyara. Ndokunge, iyo mari ichaiswa kuti iite icho chirongwa.
Iyo inofungidzirwa mambure emari kuyerera. Ndokunge, izvo zvinofungidzirwa kuzadzikiswa.
Kuti uverenge iyo IRR yebhizinesi, iyo imwecheteyo NPV fomula inoshandiswa; asi pachinzvimbo chekuwana izvi, zvaunoita kutsvaga kuti mutengo wekudzikisa chii. Nekudaro, iyo IRR fomula ichave iri:
NPV = BNA - Investment (kana mutengo wekudzikisa).
Sezvo isu tisingade kutsvaga iyo NPV, asi panzvimbo pekudyara, fomula yaizoita seiyi:
0 = BNA - Investment.
BNA yaizove iyo mambure emari kuyerera nepo ini ndiri izvo zvatinofanirwa kugadzirisa.
Semuenzaniso, fungidzira iwe une chirongwa chemakore mashanu. Iwe unoisa mari gumi nemaviri euros uye, gore rega rega, une mambure emari kuyerera kwema 12 euros (kunze kwegore rapfuura, rinova zviuru zvishanu). Nekudaro, iyo nzira ichave iri:
Izvi zvinotipa mhedzisiro yekuti i yakaenzana ne21%, iyo inotitaurira kuti chirongwa chinobatsira, uye kuti IRR yakanaka, kana chiri icho chaicho chinotarisirwa kuwanikwa. Rangarira kuti iyo yakaderera kukosha, iyo purofiti yauri kuongorora ichave nekupa pundutso.
Uye apa ndipo panotarisirwa purofiti. Semuenzaniso, fungidzira iwe uine chirongwa chinotaridzika kwazvo kubatsira uye chinokwezva. Uye kuti unotarisira kuwana purofiti inokwana gumi muzana pazviri. Mushure mekuita iwo manhamba, iwe unoona kuti chirongwa ichi chiri kuzokupa iwe kudzoka kwe10%. Izvo zvakanyanya kupfuura zvawaitarisira, uye saka icho chinhu chinokwezva uye icho chiri kukuudza iwe kuti IRR yakanaka.
Panzvimbo iyoyo, fungidzira kuti panzvimbo yeiyo 25%, izvo iyo IRR inokupa iwe i5%. Kana iwe wawana gumi, uye ichikupa iwe mashanu, zvaunotarisira zvinodonha zvakanyanya, uye kunze kwekunge wafunga neimwe nzira, chirongwa ichocho chaisazove chakanaka (uye chingadai chisina chakanaka IRR) zvichibva pane yako mari.
Muzhinji, bhizinesi rakachengeteka, uye risingabatanidzi njodzi, rinomhan'arira IRR yakanaka, asi yakaderera. Kune rimwe divi, kana iwe uchibheja pamabhizinesi ayo anoda imwe njodzi, chero bedzi iwe uchiita nemusoro uye ruzivo, iwe unogona kutarisira kuti kuchave neiyo IRR pamwe nechimwe chinhu uye, nekudaro, zvirinani. Semuenzaniso, izvozvi zvigadzirwa zvehunyanzvi, kana izvo zvine chekuita nezvikamu zvekutanga (zvekurima, zvipfuyo uye hove) zvinogona kubatsira uye kubatsira.
Iyo IRR kana iyo yemukati mwero wekudzoka chiratidzo chakavimbika kwazvo kana zvasvika kune purofiti yeiyo chaiyo chirongwa. Kana kuenzaniswa kwemitengo yemukati yekudzoka kwemhando mbiri dzakasiyana dzemapurojekiti ichiitwa, mutsauko unogoneka uripo mumatanho avo hautarisiswe.
Zvino, mushure mekuziva zvese izvi tinoshamisika zviri nyore kunzwisisa? Isu tatoziva here izvo VAN uye TIR?
Zvinogona kuti pakutanga VAN ne IRR mazwi maviri anokuvhiringidza zvishoma asi iko kuita kwekambani yako uye pamusoro pezvose kuti usarasikirwe nemari ivo ndivo vanonyanya kukosha, nekuti nekuda kweizvi unogona kuziva kana chirongwa chinobatsira zvechokwadi kuti iwe unogona kuisa mari mairi kana kana iwe uine sarudzo pakati pemapurojekiti akati wandei, iwe unogona kuziva kuti ndeipi purojekiti inobatsira.
Zvakare zvinokutendera ziva kana chirongwa chisiri kubatsira ndeupi musiyano wekuti iwe unomira kuhwina.
Naizvozvo, ese ari maviri NPV uye IRR zvinowirirana maturusi emari uye ivo vanogona kutipa yakakosha dhata pamusoro pemakambani kana mapurojekiti atiri kuda kuisa mari, tichiva nechokwadi chekuti tinogara tiine zana muzana rezvibatsiro muzvirongwa zvaunoda kuita.
Tsvaga kuti chii ROE kana Kudzoka paEquity iri:
Chii chinonzi ROE?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » VAN uye TIR
Mhoroi, zvingadai zvakave zvakanaka kana iwe ukasanganisira mafomula uye mienzaniso
Lucy gutierrez akadaro
Yakanaka ruzivo !!!
Ndatenda nekutipa nemusoro wenyaya uyu zvakadzama.
Pindura kuna Lucy Gutierrez
SANDRA RODAS akadaro
Ndinoda kuti kuve nemafomula uye mienzaniso
Pindura SANDRA RODAS
Ruzivo irworwo rwunonzwisisika, KUTI UONE KANA UCHITSVIRA MIENZANISO YOKUSHANDISA, TENDA NEI Ruzivo
Pindura kuna FENIX
ceverina kuvhunduka akadaro
izvi zvakanaka, ndokumbirawo ubatanidze muenzaniso mudiki, chiitwa. Makorokoto.
Ndatenda neruzivo rwako
Pindura Ceverina Shock
Cesar Noguera akadaro
Mangwanani akanaka, akanaka kwazvo murume wechidiki, tsananguro uye kuti ubudirire iyi mienzaniso yakanaka ine mafomura uye nekudaro unokwanisa kuisa mukuita izvo zvinofumurwa murondedzero, ndinokutendai uye ndinovimba mahofisi enyu akanaka.
Pindura kuna Cesar Noguera
Wedzera kushaya basa
Batsira mushure mekushaya basa